Posted by Tranquillus | May 4, 2018 | wax soo saarka
Hadday jirin boos bannaan ama doorasho, shirkado badan oo badan ayaa dooranaya shaqadooda.
Is-beddelka is-weydaarsiga ama is-gaarsiin wanaagsan oo faylasha faylasha, haddii xalku uu faa'iidooyin badan helo wuxuu si deg-deg ah u noqon karaa riyooyin loogu talagalay dadka dhibaatada xoogga leh.
Nasiib daro, had iyo jeer ma dooran karno, sidaas darteed waa in aan la qabanno, sidaa daraadeed halkan waxaa ku qoran talooyin si aad u shaqeyn kartid meel bannaan.
Ha ka waaban inaad ka hadashid waxa ku dhibaya:
Ka hor inta aadan xitaa ka hadlin shaqada, waxaa muhiim ah inaad ka wada hadashaan deriskaaga meel bannaan oo furan oo ku saabsan caadooyinkaaga yar yar.
Waxa kale oo lagama maarmaan ah in lagu dhajiyo ereyada ku saabsan waxa kugu dhibaya, u noqoshada dabeecada ama xirfadahaaga asxaabtaada.
Dhanka kale, ha sugin, sababtoo ah haddii aad ka hadashid markaad ka soo baxayso dareemaha, tani maaha mid ugu haboon.
Samee shaqsi shaqsiyeed:
Xitaa haddii xafiiskaaga furan yahay, waxaad samayn kartaa aag yar oo shakhsiyeed.
Qaar ka mid ah qurxinta ama sawirka carruurtaada ayaa kaa caawin doona inaad abuurto xumbo yaryar, oo si fiican ugu shaqeyn karto meel bannaan.
Iska dhig inaad naftaada u leedahay hawlo u baahan:
Hawlaha qaar ayaa laga yaabaa inay u baahdaan xoogaa diirad saaris ah haddii aad haysato fursad aad iskaga goosatid naftaada si aad u qabsatid, ha ka baqin.
Way fududaan doontaa haddii aad ka shaqeyso laptop ama kiniin iyo haddii shirkaddaadu leedahay qol gaar ahaan loogu talagalay in lagu fududeeyo go'doominta.
Haddii kale, waxaad isticmaali kartaa qolka shirarka ama xafiiska qof shaqaale ah oo maqan.
READ U maaree boostadaada si wax ku ool ah
Isticmaal skafka dhegaha si aad si fiicasho leh u fiirsato
Haddii aadan haysan fursad aad kaga tagto boostadaada si aad uhesho naftaada, ma jirto wax ka fiican samaacadaha dhegaha ama dhagaha.
Intaa waxaa dheer, dhageysiga muusikada markaad shaqeyneyso waxay kaa caawineysaa inaad diirada saarto.
U hubso inaad maqasho giraanta taleefanka haddii aad u baahato in la gaaro.
Iyo haddii ay jirto inkasta oo ay ka mid tahay dhagaxyada iyo muusikada buuqa ku hareeraysan ay kaa hortagayaan inaad si waxtar leh u shaqeyso, munaasabada ugu dambeysa waa dhageysiga.
Saacadaha shaqada ee firaaqada ah:
Shirkadaha qaarkood waxay bixiyaan shaqaalahooda saacadaha shaqada ee dabacsan. Haddii taasi ay tahay kiiska ganacsigaaga, ku raaxee.
Waxaad imaan kartaa aroortii hore ama shaqo ka dib fiidkii. Hadafku waa inuu yimaadaa marka qofku yaryahay iyo sidaas darteed marka uu dego.
Haddii aysan suurtagal ahayn, ha ka waaban inaad la hadasho agaasimahaaga ilaha aadanaha. Xaqiiqdii wuxuu awoodi doonaa inuu qabanqaabiyo waqtiga shaqadaada si aad si karti leh uga shaqayn karto meel bannaan.
Sidee si firfircoon uga shaqeyn kartaa meel bannaan? Janaayo 16th, 2020Tranquillus
horeXirfadaha muhiimka ah ee lagu hormarinayo otomaatiga xafiiska
socdaXaaladda shaqada sunta ah: sida loo soo saaro?